गलाती ४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
४ अब म भन्छु, उत्तराधिकारी नाबालक छउन्जेल, ऊ सारा सम्पत्तिको मालिक भए तापनि एक जना दासभन्दा केही फरक हुँदैन, २ तर उसको बुबाले पहिल्यै तोकेको दिनसम्म ऊ अभिभावक र भण्डारेहरूको अधीनमा हुन्छ। ३ त्यसैगरि, हामी पनि नाबालक छउन्जेल संसारका आधारभूत कुराहरूको दासत्वमा थियौं। ४ तर तोकिएको समय पूरा भएपछि परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई पठाउनुभयो, जो एक जना स्त्रीबाट जन्मनुभयो र व्यवस्थाको अधीनमा बस्नुभयो। ५ व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूलाई किनेर छुटाउन अनि यसरी हामीलाई धर्मपुत्रको रूपमा ग्रहण गर्न सकियोस् भनेर परमेश्वरले यसो गर्नुभयो। ६ अब तिमीहरू उहाँका छोराहरू भएकोले परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई दिनुभएको पवित्र शक्ति हाम्रो मनमा पनि हालिदिनुभएको छ र यसले “अब्बा,* हे बुबा!” भनेर पुकार्छ। ७ त्यसैले अब तिमी दास होइनौ तर छोरा हौ अनि यदि छोरा हौ भने परमेश्वरले तिमीलाई उत्तराधिकारी पनि बनाउनुभएको छ। ८ यद्यपि, परमेश्वरलाई नचिन्दा, तिमीहरू तिनीहरूको दास थियौ, जो वास्तवमा ईश्वरै होइनन्‌। ९ तर अहिले तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ, अझ भन्ने हो भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई चिन्नुभएको छ; तैपनि तिमीहरू किन व्यर्थ अनि मूल्यहीन आधारभूत कुराहरूतर्फ फर्कन्छौ र फेरि त्यसैको दास बन्न खोज्छौ? १० तिमीहरू तिथि, महिना, ऋतु र वर्षहरू एउटै नछुटाई मनाउँछौ। ११ मैले तिमीहरूको खातिर बेकारमा परिश्रम गरें कि भन्ने डर मलाई लागेको छ। १२ भाइहरू हो, म बिन्ती गर्छु, तिमीहरू म जस्तै होओ किनकि पहिला म पनि तिमीहरू जस्तै थिएँ। तिमीहरूले मेरो केही खराबी गरेका छैनौ। १३ तर तिमीहरूलाई थाह छ, म बिरामी परेकोले तिमीहरूलाई पहिलो पटक सुसमाचार सुनाउन पाएको थिएँ। १४ मेरो बिमारी तिमीहरूको लागि एउटा परीक्षा थियो तैपनि तिमीहरूले मलाई घृणा गरेनौ वा घिन मानेर थुकेनौ तर परमेश्वरको स्वर्गदूतलाई झैं, ख्रीष्ट येशूलाई झैं ग्रहण गऱ्यौ। १५ तिमीहरूसित भएको त्यो उमङ्ग अहिले खोइ? किनकि म यो कुरामा पक्का छु, सम्भव भएको भए तिमीहरूले आफ्नो आँखा निकालेर मलाई दिनेथियौ। १६ त्यसोभए, तिमीहरूसित सत्य बोलेकोले के म तिमीहरूको शत्रु भएँ? १७ तिमीहरूलाई आफूतिर तान्न तिनीहरू जोसका साथ तिमीहरूको पछि लागेका छन्‌ तर तिनीहरूको मनसाय राम्रो छैन, किनकि तिमीहरू जोसका साथ तिनीहरूको पछि-पछि लागोस् भनेर तिमीहरूलाई मबाट तर्काउन चाहन्छन्‌। १८ तर यदि कोही असलै कारणको लागि जोसका साथ तिमीहरूको पछि लाग्छ भने त्यो तिमीहरूको लागि राम्रो हो। म तिमीहरूमाझ उपस्थित हुँदा मात्र होइन तर हरसमय यसो गर्छ भने १९ हे मेरा साना केटाकेटीहरू हो, त्यो राम्रो हो। जबसम्म तिमीहरूभित्र ख्रीष्ट बन्नुहुन्न, तबसम्म तिमीहरूका लागि म फेरि प्रसववेदनामा हुन्छु। २० अहिले तिमीहरूसामु उपस्थित भएर मैले बेग्लै तरिकामा बोल्न पाए पनि हुन्थ्यो, किनकि तिमीहरूले गर्दा म अन्योलमा परेको छु। २१ ए व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरू हो, मलाई भन, मोशाको व्यवस्थाले बताएको कुरा के तिमीहरूले सुनेका छैनौ? २२ उदाहरणका लागि, यस्तो लेखिएको छ, अब्राहामका दुई जना छोरा थिए, एक जना नोकर्नीबाट र अर्कोचाहिं स्वतन्त्र स्त्रीबाट। २३ तर जो नोकर्नीबाट जन्मेको थियो, ऊ अरू मानिसहरूझैं जन्मेको थियो अनि स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेकोचाहिं प्रतिज्ञाद्वारा जन्मेको थियो। २४ यी कुराहरूको लाक्षणिक अर्थ छ; किनकि यी स्त्रीहरूको अर्थ दुई वटा करार हो, एउटा सीनै पर्वतमा पाएको करार, जो हागार हो र जसले दासत्वको लागि सन्तानहरू जन्माउँछ। २५ अब यो हागारको अर्थ अरबी भूमिमा भएको सीनै पर्वत हो र तिनलाई आजको यरूशलेमसित तुलना गर्न सकिन्छ, किनकि तिनी आफ्ना सन्तानहरूसँगै दासत्वमा छिन्‌। २६ तर माथिको यरूशलेम स्वतन्त्र छ र तिनी हाम्री आमा हुन्‌। २७ किनकि यस्तो लेखिएको छ: “हे नजन्माउने बाँझी स्त्री, रमाऊ; हे प्रसववेदनामा नपरेकी स्त्री खुसीले कराऊ; किनकि त्यागिएकी स्त्रीका सन्तानहरू पति भएकी स्त्रीका सन्तानहरूभन्दा धेरै छन्‌।” २८ अब हे भाइहरू हो, हामी पनि इसहाकजस्तै प्रतिज्ञाका सन्तानहरू हौं। २९ तर त्यतिखेर जसरी अरू मानिसहरूझैं जन्मेकोले पवित्र शक्तिद्वारा जन्मेकोलाई खेदो गर्न थाल्यो, अहिले पनि त्यस्तै गर्छ। ३० यद्यपि, धर्मशास्त्र के भन्छ? “नोकर्नी र उसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनकि नोकर्नीको छोराले कुनै हालतमा स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँगै उत्तराधिकार पाउनेछैन।” ३१ यसैले भाइहरू हो, हामी नोकर्नीको होइन तर स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तानहरू हौं।
^ गला ४:६ * अरामी शब्द, जसको अर्थ हो, “हे बुबा।”